Mabaadi'da Hagida - Fuzhou Huasheng Textile Co., Ltd.
Qiimaha, Dhaqankeena, iyo Dhaqankayaga
Anaga oo ka faa'iidaysanayna hantideena gaarka ah, Huasheng waxa ka go'an in ay bixiso badeecooyin iyo adeegyo heersare ah oo kor u qaada oo kor u qaada waxqabadka macaamiisheena.
Huasheng waxaa ka go'an inuu ku fiicnaado wax kasta oo aan raadineyno inaan sameyno.Waxaan hiigsaneynaa inaan ganacsi u sameyno si joogto ah oo hufan dhammaan macaamiisheena.Macaamiishu waxay nagu hayaan kalsooni weyn, gaar ahaan marka ay timaado maaraynta macluumaadka xasaasiga ah iyo sirta ah.Sumcadayada daacadnimada iyo wax-ka-qabashada cadaaladda ah ayaa aad muhiim ugu ah kasbashada iyo xajisanaanta kalsoonida.
Ganacsigeenu wuxuu ka bilaabmaa dad waaweyn
Huasheng, waxaanu ku dooranaynaa cidda aanu shaqaaleysiino waxaanu shaqaaleysiinaa dad qalbiyo leh.Waxaan diirada saareynaa inaan is caawino midba midka kale si uu ugu noolaado nolol wanaagsan.Waanu isku danaynaa, markaa daryeelka macaamiisha ayaa si dabiici ah u timaada.
Xeerka Anshaxa ee Huasheng iyo siyaasadaha Huasheng waxay khuseeyaan dhammaan agaasimayaasha Huasheng, saraakiisha, iyo shaqaalaha shirkadda.Waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan shaqaale kasta inuu u maareeyo xaaladaha ganacsi si xirfad leh oo caddaalad ah.
Huasheng waxaa ka go'an inuu u hoggaansamo mabaadi'da suuban ee maamulka shirkadaha wuxuuna qaatay hab-dhaqannada maamulka shirkadaha.